Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert, Joël Dicker's yekugadzirisa kubudirira | Zvazvino Zvinyorwa
Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert
John Ortiz | | Type, Mabhuku, Novela
Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert.
Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebec inoverengeka nemunyori weSwitzerland Joël Dicker. Yakaburitswa muchiFrench mugore ra2012 -Le Vérité sur l'Affaire Harry quebert- akawana budiriro yepasirose yekubudirira. Gore rimwe chetero basa rakagashira Mubairo Mukuru weNovel kubva kuFrench Academy uye neGoncourt Prize kubva kuVadzidzi.
Kubva ipapo, iro bhuku rakashandurwa mumitauro inodarika makumi matatu nematatu uye rakatogadziridzwa seye mini-nhepfenyuro yeterevhizheni. Iyo yerudo inonakidza inotarisa munyori Marcus Goldman. Ndiani anoedza kuratidza kusavimbika kwemudzidzisi wake, Harry Quebert, anofungidzirwa mukufa kwaNola Kegerllan, kwakaitika makore makumi matatu nematatu apfuura.
1 Nezve munyori, Joël Dicker
2 Mamwe mabasa ake ese nemubairo
3 Pfupiso yeChokwadi Nezve Iyo Harry Quebert Affair
3.1 Iyo isina chinhu peji chirwere
3.2 Mupomeri mukuru
3.3 Kubudirira kwekutsvaga kwaGoldman
3.4 Kudanana uye kupwanya
3.7 Zvinopfuura chokwadi chimwe chete chinowanikwa
4 Kugamuchirwa kwekushoropodzwa kwemunyika dzese. Ongororo (XNUMX)
Nezve munyori, Joël Dicker
Joël Dicker akaberekerwa kuGeneva, Switzerland, muna Chikumi 16, 1985. Kubva paudiki hwake akaratidza fungidziro huru yekunyora nemasikirwo, kuuya kuzowanikwa Magazini yemhuka ane makore gumi ekuberekwa. Muna 10 akapedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeGenève semunhu akapedza kudzidza muMutemo.
Mamwe mabasa ake ese nemubairo
The Tiger - El Tigre (2012). Wepasi rose mubairo wevadiki vefrancophone vanyori.
Les Derniers Jours De Nos Peres - Mazuva ekupedzisira emadzibaba edu (yakatumirwa kumakwikwi muna 2010; yakatangwa nemuparidzi L'Age d'Homme Muna 2012). Prix ​​des Ecrivains Genevois.
Le Livres kubva kuBaltimore - Bhuku reBaltimore (2017).
Kuparadzaniswa kwaStéphanie Mailer - Kunyangarika kwaStéphanie Mailer (2018).
Pfupiso ye Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert
Iyo isina chinhu peji chirwere
Kutanga kweruzivo kunosanganisira Marcus Goldman akavharidzirwa zvachose mukuyedza kwake kuburitsa yenhau yechipiri. Ari pasi pekumanikidzwa nekuda kwechibvumirano chinobhadhara chakasainwa rinopfuura gore rapfuura neine mbiri yekuburitsa imba inoda bhuku nyowani. Chibvumirano ichi chakatendera protagonist kutungamira hupenyu hwakapfuma uye hwoumbozha mushure mekubudirira kweruzivo rwake rwekutanga.
Neichi chikonzero, anosarudza kubata chipangamazano wake, Harry Quebert, uyo anomukoka kuti amushanyire kumba kwake kuSomerset, New Hampshire. Asi zano iri rekumutsiridza kugona kwako rinokundikana. Hongu, sekushanya kwaimboenda kumba kwevabereki vake muNew Jersey nekuFlorida. Marcus anobva muguta. Nekudaro, anodzoka nguva pfupi yapfuura apo iye paanonzwa nezvekuwanikwa kwezvakasara zvaNola Kellergan pamucheto weiyo chivakwa cheQuebert.
Nola Kellergan akashaya kwemakore makumi matatu nematatu. Imwe yemanyoro aHarry yakawanikwa pamwe chete nemutumbi waNola wakavigwa. Nekuda kweizvozvo, Quebert anobva asungwa naPerry Gahalowood wemapurisa ehurumende. Harry zvakare anova mukuru wekufungidzira mu (zvisina kujeka) kupondwa kwaDeborah Cooper, kwakaitika husiku humwechete nekutsakatika kwaKellergan.
Paakadzokera kuSomerset, Marcus anobva angoziva kuti Harry aive nehukama hwepachivande naNola asati anyangarika. Panguva iyoyo, aive nemakore gumi nemashanu uye aive nemakore makumi matatu nemana. Saizvozvowo, Marcus anowana bhuku rechipiri raQuebert, Kwakabva uipi, yaive yakavakirwa pakudanana kwake naKellergan. Humbowo hunokurumidza kutendeuka ruzhinji kupokana Harry.
Kubudirira kwekutsvaga kwaGoldman
Benjamin Roth - Gweta raHarry - anokumbira rubatsiro kuna Goldman. Panguva imwecheteyo, vapepeti vaMarcus vanomukumbira kuti anyore nezve ruzivo rwese rwakaunganidzwa nezvenyaya iyi. Nguva pfupi yapfuura, hunhu hwehukama pakati paHarry naNola hunoburitswa: ainyatsomuda, haaigona kumuuraya. Marcus anoshanda pakugadziriswa kwekuferefetwa naGahalowood, Travis Dawn (Chief of State Police) nemukadzi wake, Jenny.
Pakati pavo, kuurayiwa kweaimbova mukuru wemapurisa, Pratt (uyo akamanikidza Nola kuti aite bonde remukanwa paari). Gare gare, Marcus anonzwisisa kuti Harry akatamira kuSomerset mu1975, achitsvaga kurudziro yekunyora yake yechipiri novel. Quebert akaramba asina runyorwa kusvika mukana wake wekusangana naNola pamhenderekedzo yegungwa, panguva iyo vese vakawira murudo.
Kudanana uye kupwanya
Zvekudanana zvakachengetwa zvakavanzika. Asi vakawanikwa naLuther Caleb, akaremara mutyairi wemabhirionia Elijah Stern, ngochani "kabhodhi" aimbova muridzi wemba kwaigara Harry. Kune rimwe divi, Luther aidawo naNola uye ainakidzwa neyakafungidzirwa idyll kuburikidza naHarry naNola. Luther naHarry vese vakatsamwisa Mupurisa Travis Dawn, uyo akamhanyisa chiteshi cheguta.
Kwayedza yaidanana muchivande naJenny Quinn, mwanasikana wevaridzi ve Kudya kwaClark. Nekudaro, Jenny aive nemoyo munyoro kunaLuther uye aive nerudo naHarry. Pakati pehusiku hwaAugust 30, Harry naNola vakabvumirana kusvetuka pamwechete kuCanada. Luther, achiziva zvaida kuitika, akapa Nola chokufambisa kunzvimbo yemusangano, iyo Sea Side Hotel.
Luther akaita nerudo rwake kuna Nola, nekuti, pamusoro pezvose, aida kumuona achifara. Travis akaona Luther achitungamira Nola kumotel ndokutanga kuvatevera. Mutyairi nemusikana vakaedza kuhwanda musango, asi vakateedzerwa naDawn uye (nenguva iyoyo) Chief Pratt. Pakupedzisira, mapurisa akanetsa Luther ndokumurova kusvikira afa. Nola akaedza kupindira pasina, zvisinei, anofunga kutiza mushure mekurohwa mumhino.
Nekutya, akaedza kunopotera mumba yaive padyo. Kero yacho yaive yaDeborah Cooper, uyo, semupupuri, akaurayiwa naPratt. Apo Nola akaedza kutiza, Travis akamuuraya. Mutumbi waNola wakavigwa panzvimbo yaHarry nemhondi. Gare gare, vakaisa mutumbi waLuther mukati memotokari yavo ndokumukanda padombo mune imwe nyika.
Jenny akaroora Travis. Akavanza chero zano rekukanganisa kumurume wake pakasvika Marcus mutaundi. Saizvozvowo, Jenny akafukidza kupondwa kwaTravis kwaPratt (ivo vaida kuti iite senge tsaona yakakonzerwa nekutsemuka). Pamusoro pezvo, baba vaJenny vakaedza kumuregedza nekumisikidza pfuti yaPratt pachiitiko, iyo imwechete yakashandiswa kuuraya Mai Cooper makore makumi matatu apfuura
Zvinopfuura chokwadi chimwe chete chinowanikwa
Chekupedzisira, chokwadi chese nezve mhondi uye zvekuvharira zvinobuda pachena. Ruvengo rwese kuna Harry rwunova rudo rwunogamuchirwa kubva kune vamwe vagari vemuSomerset. Marcus parizvino akafuma uye ane mukurumbira. Asi pachine chokwadi chinofanira kuburitswa: Kwakabva uipi Izvo hazvina kunyorwa naHarry, munyori chaiye aive Luther. Ndiri kureva, bhuku raHarry Quebert rekutsaurira raive kunyengera.
Kunyangwe ainyora mamwe magwaro, richiri basa remunyengeri. Mushure memazuva mashoma Harry anonyangarika, achisiya chinyorwa chake, Gungwa reSomerset, kwaanorondedzera rudo rwake rwekufungidzira naNola. Kugadziridza kwekupedzisira kunopedzwa apo Marcus anoburitsa Gungwa reSomerset pasi pezita rekuti Luther Caleb.
Kugamuchirwa kwekushoropodzwa kwemunyika dzese. Ongororo (XNUMX)
"Pakupedzisira unosara wakaneta uye ukashamiswa nekuyerera kusingaperi kwemanyorero adrenaline, ayo murondedzeri aigara achipinza mutsinga dzako." Marc Fumaroli, Le Figaro.
“Kana iwe ukaisa minwe yako mukati meino hunyanzvi novel, zvinokubata iwe. Iwe haugone kumira munhangemutange inokutora iwe kuenda kune rekupedzisira peji. Iwe unozoshandisirwa zvakadzama, kushamisika, kutsamwiswa uye kutorwa nenyaya yakazadzwa nemitsetse yakawanda, tsvuku tsvuku uye kutaridzika kunoshamisa muchiitiko chega chega. Bernard Pivot, Sunday Newspaper.
"Mushure Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert, iyo yazvino novel haizove yakafanana uye hapana munhu anogona kunyepedzera kusazviona. Mutongo: Summa cum laude… dzinosvika zana negumi kubva pa110. Nhau yakanaka ”. Antonio D'Orrico, Corriere della Sera.
“Bhuku iri richakosheswa nekufundwa nevanyori vemangwana. Ichi chinhu chinonakidza ... Verenga bhuku iri ”. Enrique de Hériz, Pepanhau reCatalonia.
"Joël Dicker akanyora bhuku rinoratidza chaizvo zvinogona kuitwa kana munyori mudiki aine hushingi hwekupa zvese zvese mubasa rake ... Haana kungoshinga kutarisa hukuru hwevanhu vane zvipo vakaita saPhilip Roth kana John Irving, chaizvo Yakavapfuura… Iyo ine zvese zvigadzirwa zvevatengesi vepasirese ”. Vezera Teuwsen, Die ziet.
“Joël Dicker akakurira vaverengi vake. Nhaurirano dzinoshamisa, mavara ane mavara, kumisikidza kumisikidza uye zano risingabvumidze kufema kunombomira… Zvese zvakanyatsobatanidzwa kugadzira nyaya isina kana chinhu chairi ”.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert
Ndatenda nechidimbu chako chakazara! Imwe nguva yapfuura ndakaverenga bhuku iri uye ndakarida, ikozvino ini ndichatanga ne "Avo vanobva kuBaltimore" uye ini ndaida kuzorodza pfungwa dzangu dzenyaya. Ndakatsvaga zvirevo zvakakwana asi hapana chakaita seyako.
Pindura kuna Fab